Lactoferrin (LF) waa borotiin dabiici ah oo ku jira caanaha mammalian iyo muujinta astaamaha ka hortaga microbial. Tan iyo markii la aasaasay 60-meeyadii, waxaa jiray daraasado badan oo lagu ogaanayo qiimaha daaweynta ee glycoprotein iyo doorka xasaanadda.
In kasta oo dhallin-yarada ay ka heli karaan kabitaanka naasnuujinta hooyadood, budada lactoferrin-ka-ganacsiga leh ayaa la heli karaa da 'kasta.
1. Waa maxay Lactoferrin?
Lactoferrin (146897-68-9) waa glycoprotein bir-qabad leh oo ka tirsan qoyska wareejinta. Borotiinkani wuxuu hodan ku yahay unugyada ka hortaga waxayna ku jiraan caano iyo digaag labadaba. Ka sokow, waa soo bixitaannada dheecaanka noolaha inta badan sida ilmada, candhuufta, dheecaanka sanka, casiirka naaska, iyo dheecaanka. Jirka ayaa si dabiici ah u siidayn doona glycoprotein isaga oo ka jawaabaya kicinta firfircoonaanta.
Kahor intaadan sameyn a lactoferrin iibsan, warqad u qaado faallooyinka si aad u aragto haddii dheeri loo qalmo.
Xaddiga hodanka ah ee lactoferrin-ka ayaa ku jira dambas, kaas oo ah dheecaankii ugu horreeyay ee dheg-dhega ah ee la soo saaro ka dib dhalmada. Waxay ku qarsoon tahay caano gudaha labada ama saddexda maalmood ee ugu dambeeya umusha. In kasta oo sirtu ay u soo dhowaato, xaddiga badan ee lactoferrin ayaa wali laga heli karaa xilliga ku meelgaarka ah iyo caano baaluq ah.
Marka, sidee uga soo saartaa lactoferrin dusha sare ee loo yaqaan 'colostrum colostrum'?
Ii oggolow inaan ku maro qalliin toosan ee go'doominta lactoferrin.
Tallaabada ugu horreysa waxay ka kooban tahay whey caano. Whey waa dheecaanka dareeraha ah ee sii jira ka dib markii caano ku milmo ama ku qaso xarun aashitada ah. Habka go'doominta wuxuu adeegsanayaa iswada dhexgalka hydrophobic iyo koromograafinta ion-ion-chromatography oo ay ku xigto ku biiritaan isdaba joog ah xalka cusbada.
Dambaska 'Bovine colostrum' wuxuu ka yimaadaa lo '. Waxay qani ku tahay borotiinno, unugyada difaaca jirka, macdanaha, fiitamiinnada, kaarboohaydraytyada iyo dufanka. Qiyaasayaashani waxay xaqiijiyeen qiimaha dawada ee dambas, sidaa darteed, waxay soo jiiteysaa xiisaha u dhexeeya saynisyahannada cilmi-baarista ee qaybta caafimaadka.
Marka la eego in waxa ku jira lactoferrin uu hoos u dhacayo xilliga dhalmada ka dib, illaha bedelka ah ayaa lagula taliyaa dhallaanka. Qaado, tusaale ahaan, Nooca caadiga ah ee loo yaqaan 'LF' isla marka uu dhasho waa qiyaastii 7-14mg / ml. si kastaba ha noqotee, fiirsashada ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo ilaa 1mg / ml caano baaluq ah.
Haddii aad rabto inaad ku noqoto dib-u-dhigga immunology lactoferrin, waa inaad banki ka dhigtaa kabidda korantada ee loo yaqaan 'colostrum supplement'.
Budada lactoferrin bulk ayaa ah wax soo saar colostrum bovine. Si kastaba ha noqotee, sheygu wuxuu walwal ku hayey dadka qaarkood oo u muuqda inay ka xanaaqsan yihiin inuu ku dhacay cudurka lo'da ee waalan. Hagaag, aan kuu xaqiijiyo in xaaladdani ay naadir tahay. Ka sokow, qaar ka mid ah kabitaannada loo yaqaan 'lactoferrin supplement' waa soo saarista bariiska hiddo-wadaha dabiiciyan ah, ee doorbida dadka u adkaysan kara lactose.
2. Waa maxay sababta loo adeegsado budada 'Lactoferrin Powder' sida Dheeraadka ah, Faa'iidooyinka Lactoferrin waa?
Cutibacterium iyo propionibacterium ayaa mas'uul ka ah finanka badankood. Lactoferrin-ka ayaa ka hortaga bakteeriyadaas birta oo yareynaya saameyntooda.
Xaaladaha qaarkood, xag-jiryo bilaash ah iyo noocyo oksijiin ah oo falceliya ayaa gacan ka geysan kara dhaawaca unugyada iyo dhaawaca DNA. Dhibaatada loo yaqaan 'oxidative stress', caabuq ayaa ku dhici kara oo saameyn ku yeelan kara koritaanka finanka. Sida laga soo xigtay saynisyahano cilmi-baarayaal ah, lactoferrin waa anti-oxidant awood leh, sidaa darteed, suurtagalnimada la-dagaallanka xagjirnimada xorta ah.
Qaadashada lactoferrin oo ay la socoto fitamiin E iyo zinc waxay yareyn doontaa nabaro nabarro iyo comedones illaa saddex bilood gudahood.
Ka sokow, caabuqyadu waxay si toos ah u horseedaan abuuritaanka finanka iyo finanka iyagoo xira muruqyada. Astaamaha anti-bararka ee lactoferrin waxay dammaanad ka dhigtaa bogsashada dhaqsaha ah ee nabarrada.
Takhaatiirta maqaarka ayaa ku adkeysaneysa xaqiiqda ah in caafimaadkaaga cirridku inuu yahay muuqaal maqaarkaaga ah. Tusaale ahaan, haddii calooshaada caloosha ay liqdo ama aan caafimaad qabin, isticmaalka dhammaan noocyada kareemada wejiga ama probiotics adduunka ma xallin doonto caabuqa maqaarka, ciyaaraha, ama canbaarta. Qaadashada daawada loo yaqaan 'lactoferrin' ayaa ku qulqulaya sheybaarka waxyeelada leh habka dheef-shiidka iyadoo kor u qaadeysa waxqabadka Bifidus flora.
Marka laga reebo daweynta finanka, lactoferrin waxay yareeysay astaamaha cudurka 'psoriasis' waxayna dardar gelisay soo kabashada nabarrada lugaha, taas oo ku badan bukaannada qaba sonkorowga.
Daraasado la tirin karo ayaa xaqiijinaya in Lactoferrin (LN) ay ka hortagayso fayraska, bakteeriyada, dulinnada, iyo caabuqyada fangas inay weeraraan jirka. xarunta ayaa ku shaqeysa iyaga oo ku xiraya microbes-yadaas, carqaladeeya qaab dhismeedka unugyadooda, isla markaana xannibaya kuwa soo gala gacanta.
Daraasad gaar ah, saynisyahannadu waxay xuseen taas lactotransferrin (LTF) ayaa ka hufan ka hortagga fayraska herpes marka loo eego nooca aadanaha. Daraasadaha 'vitro' sidoo kale waxay muujinayaan in kabitaankani si wax ku ool ah u maareeyo saameynta HIV.
Qiyaasta xoogaa sarreysa, lactoferrin wuxuu u shaqeeyaa si loo maareeyo virulence of Hepatitis C. Marka loo eego Cilmi Baadhista Cilmiga Dhakhtarka, daaweyntaani waxay kordhineysaa muujinta interleukin-18, borotiin mas'uul ka ah dib u celinta viruska Cagaarshowga C. Si loo helo hufnaanta ugu sarreysa, bukaannadu waa inay qaataan qiyaastii 1.8 illaa 3.6 garaam oo dheeraad ah maalin kasta. Sababta ayaa ah in qaadashada hoose ee lactoferrin aysan wax isbedel ah ku yeelan doonin waxa ku jira fayraska.
Waxaa jira mala-awaal, kuwaas oo loo tixgelinayo LF inay yihiin daaweynta loogu talagalay infekshanka helicobacter pylori. Markaad ku dhejiso dheellitirka daawaynta boogtaaga caadiga ah, fursadaha ayaa ah in daawooyinku ay noqon doonaan kuwa aad waxtar u leh. Sheegashadani waxay laf dhabar u ahayd baarayaasha maadaama aqlabiyadda ay aaminsan yihiin in isticmaalka looska loo yaqaan 'lactoferrin powder' uu noqon doono mid aan shaqeynaynin markii la waayo daawo qorista.
Xeerarka Metabolism-ka Iron
Lactoferrin ma xakamayn doonto kaliya uruurinta bir ee jirka laakiin waxay kordhin doontaa nuugista.
Waxaa jiray daraasado caafimaad oo socda oo doonayey in la isbarbar dhigo waxtarka LF ee ka dhanka ah sulfate sulfate ee dhiig yaraanta dhiig yaraanta muddada uurka. Hagaag, laga soo bilaabo tijaabada, lactoferrin wuxuu cadeeyay inuu awood badan ku leeyahay dhiirrigelinta sameynta haemoglobin iyo unugyada dhiigga cas.
Haweenka cunaya glycoprotein-ka waxay leeyihiin heerar bir ah oo aad u fiican oo leh waxyeellooyin dhinaca eber ah. Lactoferrin waxay shaqeysaa si loo yareeyo suurtagalnimada dhicin, dhalashada kahor, iyo miisaanka dhalashada oo yar.
Sidaa daraadeed, way cadahay inay tahay taakuleyn fiican oo loogu talo galay hooyooyinka uurka leh iyo haweenka da'da dhalmada ee lumiya birta xoogaa markay howlahooda wadaan. Khudaarta cagaaran iyo ku-tabarucayaasha dhiigga ayaa waliba si fiican uga faa'iidaysan kara kaabayaasha lactoferrin.
Gaaska calool xanuunka qaba
Lactoferrin dheeri ah ayaa dheecaan ka dhigaysa oo u ilaaliya inay caloosha caafimaad qabtaa. Waxay ka takhalustaa bakteeriyada waxyeellada leh, kuwaasoo mas'uul ka ah caabuqa. Tusaale ahaan, microbes-kaani waxay la xisaabtamaan inta badan kiisaska caloosha iyo mindhicirka iyo enterocolitis, kuwaas oo wax u dhinta darbiyada xiidmaha oo horseeda geerida dhicis. Haddii sabab uun jirta awgeed, ilmahaagu aanu nuugin, waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad u weecato lactotransferrin (LTF).
3. Faa'iidooyinka Lactoferrin ee Ilmaha
Lactoferrin dheeri ah ayaa carqalad ku noqonaysa koritaanka sheyga yaryar ee mugga dhallaanka cusub. Microbes-ku waxaa ka mid ah Escherichia coli, Bacillus stearothermophilus, Staphylococcus Albus, Candida albicans, iyo Pseudomonas aeruginosa. Dhowr daraasadood ayaa taageeraya xaqiiqda ah in maalin kasta qaadashada lactoferrin inta badan lagu daro yareynta fursadaha cudurka caloosha ee gala caloosha.
Weli wuxuu ku jiraa xiidanka, LF waxay sare u qaaddaa kordhinta unugyada endothelial-ka halka ay ka baxeyso koritaanka dheecaanka unugyada galmada. Sidaa darteed, way cadahay in lactoferrin dheeri ah ay u noqon karto dawo loogu qoro xabka xiidmaha.
Naasnuujintu waa isha ugu weyn ee birta laga helo neonates. Si kastaba ha noqotee, dhakhaatiirta carruurtu waxay ku talinayaan in dheeri dheeraad ah oo bir ah loo baahan yahay maadaama caanaha naaska ay ku jiraan xaddi yar oo macdan ah.
U oggolow in aan sharraxo sababta LF u tahay dheeri ku habboon dhallaanka hore iyo dhallaanka ku dhashay miisaan culus. Badanaa, kooxdani waxay aad ugu nugul yihiin dhiig yaraanta birta. Maamulka lactoferrin dheeri ah waxay kordhin doontaa haemoglobin iyo unugyada dhiigga cas cas ee nidaamka socod baradka. Waxaa intaa dheer, daraasado ayaa cadeynaya in kaabista birta ahi ay kordhineyso horumarka dareemeyaasha ee ilmaha.
Waqtiyada qaarkood, bakteeriyada waxyeelada leh sida E.coli waxay ku quudiyaan birta ku jirta marinka xiidmaha. Qaadashada lactoferrin waxay xayiranaysaa microbes-ka birta oo way burburin doontaa iyadoo la hubinaayo in martigeliyaha uu helayo dhammaan macdanta la heli karo.
LF door weyn bay ka ciyaaraan horumarka nidaamka difaaca ilmaha. Qaar ka mid ah budada loo yaqaan 'lactoferrin buddadaan' waxaa ka mid ah kordhinta waxqabadka macrophages, immunoglobulins, unugyada NK, iyo T lymphocytes, kuwaas oo mas'uul ka ah xasaanadda dhalmada cusub. Waxaa intaa sii dheer, maareynta LF waxay yareysaa u nuglaanta u nuglaanta xasaasiyadda.
4. Sidee Lactoferrin u Hagaajisaa Nidaamka Tallaalka?
Dhex dhexaadiyaasha u dhexeeya Laqabsashada iyo Hawlaha Tallaalka ee Innate
Jawaabta kahortagga ee hiddaha, lactoferrin wuxuu u dhaqmaa dhowr siyaabood. Tusaale ahaan, waxay wanaajisaa howlaha unugyada dilaaga dabiiciga ah (NK) iyo neutrophils. Borotiinku wuxuu xoojiyaa phagocytosis wuxuuna sababayaa kordhinta macrophages.
Jawaabta la-qabsiga, LF waxay ku caawineysaa isbadalidda unugyada T-unugyada iyo unugyada B-unugyada. Xaaladaha dillaaca bararka, labadaba howlaha ka hortagga uurjiifka iyo la-qabsiga waxay ku midoobi doonaan ka hortagga dhacdada.
Lactoferrin ayaa nidaamisa soosaarka 'cytokines pro-inflammatory cytokines' iyo 'interleukin 12', oo soo bandhigaya guryaha difaaca ee ka hortaga cudurada ku dhaca gudaha.
Dhex-dhexaadiyeyaasha Nidaamka Jawaabta Xanuunada Habdhiska (SIRS)
Doorka budada lactoferrin xakamaynta noocyada ogsijiinta firfircoon ee loo yaqaan (ROS) waxay aasaas u ahayd barashada daraasad laxiriirta caabuqa iyo horumarka kansarka. Kordhinta ROS waxay u tarjumaysaa halista sare ee xaaladaha bararka sababtuna tahay apoptosis ama dhaawaca gacanta.
Ka-hortagga Ka-hortagga Maaddooyinka-yaryar
Astaamaha anti-microbial ee lactoferrin waxay ka goysaa bakteeriyada, fayras, dulin, iyo caabuq fangas.
Microbesku way koraan waxayna kuxiran yihiin birta koritaanka iyo badbaadada. Markay duulaan ku hayaan martigeliyaha, LF waxay ka leexinayaan awooddooda ka faa'iideysiga birta.
Intii lagu gudajiray wajigii hore ee caabuqa, lactoferrin (LF) ayaa tilaabooyin looga qaadayo kicinta shisheeyaha laba siyaabood oo qeexan. Borotiinku wuxuu xayirayaa ama ka hor tagi doonaa dadka qaataha mobilada ama waxay ku xiraysaa fayraska, sidaa darteed, waxay ka hortageysaa soo gelitaanka xerada. Tallaabooyinka kale ee lidka-microbial ee lactoferrin waxaa ka mid ah carqaladeynta habka unugyada ee cudurka 'pathogen' ama xanniba dheef-shiid kiimikaad leh.
Dhowr daraasadood ayaa cadeynaya budada lactoferrin in loo isticmaalo maaraynta viruska herpes, infakshanka HIV, cagaarshowga C iyo B, hargabka, iyo hantavirus. Ka sokow, kabitaanku wuxuu xannibay fiditaanka alfaayruska, rotavirus, papillomavirus bini-aadamka, iyo dhowr kale.
Xaaladaha qaarkood, Lactoferrin ayaa laga yaabaa inayna ka daadin dhammaan cudurrada laakiin waxaad hubin kartaa inay yareyn doonto darnaanta culeyska fayraska jira. Daraasadihii hore, LF waxay waxtar u lahaayeen xakameynta cudurka 'SARS pseudovirus'. Maaddaama SARS-CoV-2 ay ku dhacdo isla fasalkii SARS-CoV, waxaa jira suurtagal in lactoferrin ay yareyn karto jahwareerka COVID-19.
In kasta oo ay dhakhaatiirtu qabanayaan in kor u qaadista hawlahaaga difaaca aysan ka ilaalin doonin qof cudurka loo yaqaan coronavirus, kordhinta lactoferrin ayaa ka caawin doonta dagaalka. Ka dib oo dhan, isla dhakhaatiirtu waxay arkeen in dadka da'da ah iyo dadka liitoodu liito ay khatar weyn ugu sugan tahay inuu ku dhaco cudurka COVID-19.
5. Isticmaalka Lactoferrin Powder iyo Codsiga
Budada 'Lactoferrin bulk' waxaa loo heli karaa saynisyahano cilmi baarayaal ah iyo aqoonyahano doonaya inay aasaasaan qiimahooda daawada ee jirka bini aadamka. Waxay leedahay rajo ballaaran oo xagga codsashada ah ee kahortagga cudurrada, kaabayaasha nafaqada, cuntada iyo dawooyinka lidka dawooyinka, iyo waxyaabaha la isku qurxiyo.
Falanqayntaada iyo tijaabooyinka shaybaarka, iska hubi inaad ka soo saarto xarunta laga helo bixiyeyaasha budada lactoferrin oo ansax ah.
Budada Lactoferrin isticmaal gudaha budada caanaha ilmaha
Caanaha loo yaqaan 'budada budada' ayaa si isdaba joog ah ugu hagaagaya xagga ka tarjumaadda bayoolaji ee caanaha naaska dhabta ah ee hooyada. Lactoferrin waa tirada borotiinka ugu badan ee ku jirta caanaha hooyada. Waxay caan ku tahay keenista dhammaan noocyada faa'iidooyinka ilmaha oo ay kujirto waa bir bir loogu tala galay, kahortaga kansarka, iyo kor u qaadida lafaha caafimaad qaba kuwa kale.
Lactoferrin waa qayb ku badan caanaha hore ee hooyada kaas oo loo yaqaan colostrum. Dambarka "Colostrum" wuxuu ka kooban yahay ku dhawaad ​​laba jibaar mililitirkiiba sida caanaha naaska ee waaweyn. Tani waa in la muujiyo in dhallaanka ugu yar yari u baahan yihiin uruurin sare oo lactoferrin ah si loogu helo horumar fiican.
Hagaajinta nidaamka difaaca jirka ee ilmaha waxaa taageeraya qaybta loo yaqaan 'Lactoferrin' oo ku jirta qaacidada ilmaha. Borotiinku wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa nidaamka difaaca jirka ee ilmaha wuxuuna matalaa nidaamka difaaca anti-virus iyo anti-microbial ee ugu horreeya. Saameynta anti-microbial ee muhiimka ah waxaa badanaa la keenaa chelation-ion cheion-ka, kuwaas oo muhiim u ah koritaanka bakteeriyada. Ka sokow, lactoferrin ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay u shaqeyso sidii antioxidant-ka kaas oo xoojin kara jawaab-celinta difaaca iyadoo awood u siineysa kala-duwanaanta, fidinta, iyo dhaqdhaqaaqa unugyada difaaca.
6. Waxyeellooyinka Lactoferrin
Nabdoonaanta 'Pireemka LF' dhawr arrimood awgood
Qaadashada bulk-ka loo yaqaan 'Lactoferrin' waxay noqon karaan kuwa xayeysan. Tusaale ahaan, marka kaabista ay tahay mid laga soo helo caano lo ’, si kalsooni leh ayaad ugu cuni kartaa tiro aad u badan hal sano. Si kastaba ha noqotee, marka sheygu ka soo baxayo bariis, fursadaha ayaa ah in isdaba joog ah xad-dhaafka ah ee laba toddobaad ay kiciyaan qaar ka mid ah diidmada xun.
Dhibaatooyinka dawada lactotransferrin (LTF) ee waxyeelada leh waxaa ka mid ah;
Si ka duwan daawooyinka badankood, lactoferrinku waa u amaano uur leh iyo hooyooyinka nuujinaya.
Si looga gudbo waxyeelada lactoferrin, waxaa lagula talinayaa qiyaasta u dhexeysa 200mg iyo 400mg. Waa inaad ku qaadataa laba illaa saddex bilood oo isku xigta. Marar dhif ah, muddadu waxay socon kartaa ilaa lix bilood.
7. Kumaa Ka Faa'iidaysan Lactoferrin?
Lactoferrin ayaa faa'iido u leh hooyada iyo dhallaanka.
Inta lagu jiro xilliga uur qaadida, maareynta kaabitaankan waxay saameyn wanaagsan ku yeelan doontaa xajmiga uurjiifka iyo culeyskiisa dhalashada. Haddii hooyadu ku sii wadato qaddarka lactoferrin inta lagu jiro xilliga nuujinta, soosaarka caanaha naaska ayaa si weyn u fiicnaan doona. Ka sokow, cunuggu wuxuu si aan toos ahayn ugu faanaa dambaska si uu u ilaaliyo culeyska jirka ee caafimaadka qaba.
Dhallaanka iyo carruurta yar yar ee aan naaska nuujin ama la qasin
Dheeraadka lactoferrin wuxuu hubiyaa in ilmuhu uu yeesho hab difaac xoog leh isagoo ka difaacaya xasaasiyadda caloosha. Ka sokow, kabitaanku wuxuu u dhaqmaa sidii calool jilciye, caawinta dhaqdhaqaaqa caloosha ee ugu horeysa ilmaha. Caanaha carruurta ee hodanka ku ah colostrum-ka waxaa laga heli karaa soo-saareyaasha budada Lactoferrin-ka gudaha iyo onlaynka ah.
Dhiig yaraanta Birta
Lactoferrin dheeri ah ayaa si weyn u kordhisa heerarka haemoglobin, unugyada dhiigga cas, iyo ferritin. In kasta oo dadka intooda badani u isticmaalaan ferite sulfate inay ka hortagaan yaraanta birta, daraasado badan oo cilmi baaris ah ayaa xaqiijinaya in lactoferrin ay awood badan leedahay.
Haddii aad tahay khudrad-bixiye ama ku-deeqe dhiig oo soo noqnoqda, waxaad u baahan doontaa cunnooyin ay macdantu ku badan tahay macdanta birta si aad uga dhigto hemoglobin-ka iyo ferritin-ka hooseeya. Haddii kale, waxaad ka sameyn kartaa iib wanaagsan lactoferrin iibiyaasha internetka.
Dadka leh xasaanad hooseeya
Lactoferrin wuxuu jirka ka difaacaa cuddurada iyadoo la baabi'inayo microbes-ka faafa iyo in la xakameeyo faafitaanka bakteeriyada iyo fayraska. Xarunta ayaa si firfircoon ugu lug leh isbadalka qaabab tilmaameedka dariiqyada mas'uulka ka ah la socoshada jawaabaha difaaca ee martida.
Lactoferrin wuxuu u shaqeeyaa dhexdhexaadiye, xirida iyo isku dubbaridka isdhexgalka ka dhexeeya howlaha la-qabsiga la-qabsiga iyo kuwa aan caadiga aheyn. Tusaale ahaan, waxay wanaajisaa waxqabadka phagocytic iyada oo kor loo qaadayo unugyada xididka iyo manacarta. Nidaamka difaaca jirka ee la-qabsiga, xaruntani waxay xawaareyneysaa koriinka unugyada T-unugyada iyo unugyada B, kuwaa oo muujinaya xasaanadda unugyada iyo difaaca jirka, sida ay u kala horreeyaan.
8. Lactoferrin leh IgG
Sida lactoferrin, Igg ama immunoglobulin G waa borotiinka kahortaga microbial-ka ee ku jira caanaha mammalian.
Dhowr daraasadood ayaa la heli karaa si loo sharxo xiriirka ka dhexeeya lactoferrin iyo IgG.
Fiirsashada lactoferrin ee colostrum aad ayey uga sarreeysaa ta IgG. Sida laga soo xigtay saynisyahano cilmi-baarayaal ah, dhowr arrimood ayaa saameeya xaddiga borotiinadan caano ah.
Tusaale ahaan, lactoferrin iyo IgG labaduba waxay xasaasi u yihiin kuleylka iyo kulaylka. Immunoglobulin G ayaa u adkeysan kara daaweynta kuleylka illaa 100 ° C laakiin kaliya in yar oo ilbiriqsiyo ah. Taas bedelkeeda, lactoferrin ayaa si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacay iyadoo heerkulku kordhayo illaa uu si buuxda u hooseeyo 100 ° C.
Ku salaynta qodobbadaas, waa inaad ogaatay in wakhtiga iyo heerkulka kululaynta ay yihiin tixgelinta koowaad marka la samaynayo caano-hoosaadka. Maaddaama caano-beelista caano ay kujiraan khilaaf, dadka badankood waxay go'aansadaan qaboojinta-qalajinta.
U fiirsashada Lactoferrin (146897-68-9) ayaa maraya meeshii ugu sarreysey kadib markuu ummulay. Markii waqtiga dhalmada uu sii kordhayo, borotiinkan si tartiib tartiib ah ayuu u yaraanayaa, laga yaabee inay ugu wacan tahay yareynta dambas. Dhanka kale, hoos udhaca heerarka immunoglobulin G ayaa kudhawaad ​​dayacan inta lagu jiro xilliga nuujinta.
Si kastaba ha noqotee, lactoferrin aad u fara badan ayaa ku dhaca caanaha mammalian-ka, uruurinta ayaa wali ka sarreysa tan IgG. Xaqiiqadan wali way taagan tahay hadii ay tahay midab, kala-guur, ama caano baaluq ah.
Yamauchi, K., et al. (2006). Bovine Lactoferrin: Faa'iidooyinka iyo Farsamooyinka Ficil ee Kahortaga Caabuqa. Bayoolajiga iyo Noolaha.
Jeffrey, KA, et al. (2009). Lactoferrin ahaan Modulator Dabacsane Dabiici ah. Naqshadeynta Daawada Daawooyinka ee Hada.
Lepanto, MS, et al. (2018). Wax ku oolka ah Maamulka Afka Lactoferrin ee Daaweynta Dhiig yaraanta iyo Dhiigga ee Cudurka ku dhaca Haweenka Uurka leh iyo kuwa aan Uurka laheyn: Daraasad Faragelin ah. Xannibaadyada ku jira Immunology.
Goldsmith, SJ, et al. (1982). IgA, IgG, IgM iyo Lactoferrin Tusmooyinka Caanaha Aadanaha inta lagu gudajiro Xilliga Hore iyo saameynta Habaynta iyo Kaydinta. Joornaalka Ilaalinta Cuntada
Smith, KL, Conrad, HR, iyo Porter, RM (1971). Lactoferrin iyo IgG Immunoglobulins oo ka socda Qanjirrada 'Mamvary Mammary' ee ku lug leh Journal of Science Caanaha.
Sanchez, L., Calvo, M., iyo Brock, JH (1992). Doorka Bayoolaji ee Lactoferrin. Kaydinta Cudurrada Carruurnimada.
Niaz, B., et al. (2019). Lactoferrin (LF): Borotiin dabiici ah oo Anti-Microbial ah. Joornaalka Caalamiga ah ee Hantida Cuntada.